Articles tagged 'zimbabwe national liberation war veterans association'
War vets divided over Zanu PF bigwigs 9 November 2018 HARARE - Cracks have emerged in the Zimbabwe National Liberation War Veterans Association (ZNLWVA) over the fate of ex-Cabinet ministers assigned to the “Shake-Shake Building” to run the party's affairs on a full-time basis. ZNLWVA Mazowe district chairperson Efanos Mudzimunyi told the Daily N...
Factions re-emerge in ruling Zanu PF 23 January 2018 HARARE - Divisions have returned to haunt Zanu PF barely a month after a military operation rooted out members of the Generation 40 (G40) faction who were campaigning for former first lady Grace Mugabe to succeed her 93-year-old husband. While the military intervention code-named Operation Res...
Grace 'cried' in politburo over row with Muchinguri 16 September 2017 HARARE - First Lady Grace Mugabe sobbed in the politburo in 2015 after falling out with former Zanu PF women's league boss Oppah Muchinguri-Kashiri, Zimbabwe National Liberation War Veterans Association (ZNLWVA) chairperson Chris Mutsvangwa claimed on Wednesday. Mutsvangwa, who has since been ...
War veterans vow to de-campaign Mugabe 14 September 2017 HARARE - War veterans yesterday vowed to de-campaign President Robert Mugabe ahead of the watershed 2018 elections, saying they will make sure that the Zanu PF leader will lose by a big margin to the “people's movement.” Mugabe and his ruling Zanu PF party are due to contest a crucial general...
War vets to meet Mugabe again 22 August 2017 HARARE - War veterans are preparing for another meeting with President Robert Mugabe before the end of this year, War Veterans minister Tshinga Dube has said. Speaking to the Daily News yesterday, Dube said they were having provincial meetings with war veterans in all provinces in preparation ...
Arrest Grace: War vets 31 July 2017 HARARE - War veterans have threatened to take the law into their hands if police do not arrest First Lady Grace Mugabe who last called on President Robert Mugabe to name a successor. The angry former freedom fighters under the banner Zimbabwe National Liberation War Veterans Association (ZNLWV...
Mugabe, war vets clash looms 31 July 2017 HARARE - War veterans from ZNLWVA have threatened to take the war to President Robert Mugabe if he does not resolve the thorny succession issue their way. This comes as permanent secretary in the ministry of War Veterans Walter Tapfumaneyi told the State-controlled media that Mugabe would soon...